Hahazo ny anjarany ny kaominina 20 sy faritra 2: nanolotra ny tamberim-bidy 61 miliara Ar ny Ambatovy | NewsMada
Hahazo ny anjarany ny kaominina 20 sy faritra 2: nanolotra ny tamberim-bidy 61 miliara Ar ny Ambatovy
Hanohana amin’ny fomba fitantanana ny tamberim-bidy naloany any amin’ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ny Tetikasa Ambatovy. Tanjona ny tena hitondra fampandrosoana isaky ny kaominina sy ny faritra roa mba ho lovain-jafy.
Narotsaky ny Tetikasa Ambatovy tao amin’ny biraon’ny Tahirimbolam-panjakana Toamasina, omaly 31 aogositra, ny anjara-tamberim-bidiny avy amin’ny harena an-kibon’ny tany. Mitentina 61.481.250.243 Ar izany, nanomboka ny telo volana farany, ny taona 2012 hatramin’ny enim-bolana voalohany, ny taona 2018. Hotsinjaraina amin’ny kaominina miisa 20 sy ny faritra roa (Atsinanana sy Alaotra Mangoro) io vola io.
Tena hitondra fampandrosoana
Nambaran’ny filohan’ny orinasa Tetikasa Ambatovy, i Stuart Macnaughton, fa « Mahafaly an’Ambatovy ny nahafahany nandoa ireto tamberim-bidy ireto, efa tena nandrasan’ireo
vondrombahoaka itsinjarampahefana hatry ny ela. Tokony hanampy betsaka amin’ny fampandrosoana azo tsapain-tanana sy lovain-jafy ho an’ireo Kaominina sy faritra iasan’Ambatovy ireto loharanom-bola vaovao sy goavana ireto ».
Raha ny voalazan’ny lalàna arotsaka hoan’ny Tahirimbola “Fonds national de Péréquation” (FNP) ny 10%-n’io vola maherin’ny 61 miliara Ar io. Hozaraina amin’ireo kaominina miisa 20 sy ny faritra roa kosa ny 60% ka anjaran’ny kaominina ny 60%, an’ny faritra ny 30% ary an’ny faritany ny 10%. Noho ity farany tsy mbola tafapetraka, tsinjaraina any amin’ireo kaominina sy ny faritra voalaza etsy ambony ny anjaran’ny faritany.
Hampiasaina araka ny tokony ho izy
Natsangan’Ambatovy ny tetikasa “Tsara tantana”, hanampiana sy hanamafisana ny traikefan’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana amin’ny fitantanana maharitra ny tamberim-bidy avy amin’ny harena an-kibon’ny tany. Nomarihin’i Stuart Macnaughton, fa « vonona hatrany Ambatovy hanampy ireo Kaominina sy faritra mba ho lova maharitra ho an’ireo taranaka mifandimby ny fitantanana ny tamberim-bidy amin’ny fomba mangarahara».
Ireo kaominina 20:
Ambohibary, Andasibe, Morarano Gara, Amboditandroho Mahatsara, Toamasina Suburbaine, Ambalarondra, Ambatovola Gara, Ambinaninony, Ampasimadinika Manambolo, Ampasimbe, Anivorano Est, Beforona, Fanandrana, Antsampanana, Ranomafana Est, Vohipeno Razanaka, Vohitranivona, Brickaville, ary ny Kaominina renivohitra Toamasina sy Moramanga.